Asian Fame | Popular News | Page 7
အခု ဒီလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်ပြလာတဲ့အတွက် "တောင်ကြီး- ကျိုင်းတုံ - တာချီလ်ိတ် လမ်းကြောင်း ခရီးစဉ်တွင် Permission Tourများ သွားလာနိုင်ရေးကော်မတီ " က ခွင့်ပြု လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတ်မှတ်မှတ်တိုင်မှာမရပ်မှု၊ မှတ်တိုင်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ လူတင်/ချမှုဆောင်ရွက်ခြင်းတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ ယင်းအတွက်တိုင်ကြားမှုတွေဟာ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ သြဂုတ်လအတွင်း ၉၃၉ မှုထိရှိခဲ့တယ် . . .
မကြာသေးခင်က ဖွဲ့ စည်းလိုက်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ရုံးမှာ ......
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ၄၇ ဒသမ၆ ဘီလီယံ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုဖို့ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ကိုတင်ပြတောင်းခံခဲ့ရာမှာ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်က ၆ ဒသမ ၁၅ ဘီလီယံကိုလျော့ချဖြတ်တောက်ပြီး ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ် ။ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက်သုံးစွဲဖို့ တောင်းခံငွေထဲက လျော့ချဖြတ်တောက်လိုက်တာလို့ လွှတ်တော်မှသိရပါတယ်။
"ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှထွက်ရှိသော သယံဇာတများအား သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နှင့် ၎င်းမှရရှိသည့် .......
သစ်တောရုံးရဲ့ ၆ ပေလောက်ကွာတဲ့နေရာ သဲအိတ်တွေကာရံထားတဲ့နေရာမှာ ည ၁၀ နာရီလောက်ကွဲတာ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေတော့မရှိဘူး။ မိုင်းကတော့ လက်လုပ်ရီမုမိုင်းလို့ယူဆရတယ် " လို့ ပြည်နယ်တာဝန်မှူးကြီးရုံးရဲ့တာဝန်ရှိသူက ပေါ်ပြူလာနယူးစ်ကိုပြောပါတယ် . . .
ရွှေသံလွင် ဟိုင်းဝေးကုမ္ပဏီ(Shwe Than Lwin Highway Co., Ltd)ကို နှစ်ရှည်စာချု့ပ်နဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့ စစ်တောင်းစက္ကူစက်ရုံကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ကစပြီး...........
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါဟာ ကလေးတွေကို နှစ်စဉ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ(၂၀၁၆) ခုနှစ်မှာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း (၃၉၃) ဦးရှိခဲ့ပြီး (၂၀၁၇) ခုနှစ်မှာ အောက်တိုဘာလကုန်အထိ ရောဂါပိုးတွေ့သူ (၃၀၆) ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဦးရေဟာ ဆေးရုံကိုရောက်လာလို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့…
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) NCA လက်မှတ်ထိုး/မထိုး တစ်လအတွင်းအဖြူအမဲသည်းကွဲမယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ
"လက်လုပ်မိုင်းလာထားထားတာ။ ဘယ်သူထားသွားတာလဲ ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးပြီ။ ကျန်တာကိုတော့ တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ"